မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: Update for knowledgebridge.net
Update for knowledgebridge.net
Looks like I know the editor of the web site, I got the fair response now.
It was unintended, so, everything should be fine from now. cheers.
Here is the part of his repsonse.
ကျွန်တော်တို့ ပြောတာကို website တင်ပေးတဲ့လူတွေ သဘောမပေါက်ဖြစ်သွားတာဗျ။
ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာက Credit ပေးဖို့ကို ဆိုလိုတာ။
နောက် ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်လဲမှားနေတယ်။
- Website တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များသည် Knowledge Bridge Magazine ပိုင် အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။
ဆိုတာလဲမှားနေတယ်။ အမှန်တော့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ Content ကို စာရေးဆရာပဲပိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီက စာပေသမားတိုင်းလဲ သိကြပါတယ်။ သူတို့တင်ပြီးပြီဆိုတုန်းက ကျွန်တော် သေသေချာချာ မစစ်ဖြစ်တာ။ အဲတော့ http://www.i-web4u.com/ အပြစ်လဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကျွန်တော့်အပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ Editor Account ပဲရှိတာရယ်၊ လိုင်းမကောင်းတာရယ်ကြောင့် ဒီနေ့ချက်ခြင်းကြီးတော့ ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ နက်ဖြန် ညနေလောက် မတိုင်မှီ ပြန်ပြင်ခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်။ နက်ဖြန် ညလောက် ပြင်ပြီးရင် မေးပြန်ပို့လိုက်မယ်ဗျာ။
PS: Basically I don't mind people using it without asking but I don't like claiming me back like that. If you use other's stuff freely, Let people reusing yours freely too. Then it would be fair.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Friday, April 09, 2010
ပြန် ဖြေရှင်းတဲ့ စာက ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်လွန်းပါတယ်ဗျာ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ It's unacceptable I think! funny guys, but its usual within Burmese community. ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နေပေါင်းတွေ အရမ်းများနေပြီလေ။ နေရာတိုင်းမှာ ကိုတွေ့မြင်နေရတယ်။
Ruby: autocomplete in irb and colorize with wirble...
Compiled mysql python 1.2.3c1 for Python 2.7 for W...
knowledgebridge.net - they mentioned not to copy t...